Apple Ayaa Furay Barnaamij Lagu Badalayo Taxanaha 2aad Iyo 3aad Ee Dhibaatooyinka Jebinta Shaashada | Wararka IPhone
Mararka qaarkood Apple waxay leedahay waqti aad u adag in la aqoonsado taas wax uma shaqeynayaan sidii la rabay oo waxay qaadataa nolol oo dhan in la abuuro barnaamij beddel ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinkaas. Kiis cad ayaa laga helay dhibaatooyinka ku jira teebabka MacBook Pro, barnaamij beddel ah oo qaatay ku dhowaad 3 sano in la abuuro.
Si kastaba ha noqotee, munaasabadaha kale waxay abuurtaa barnaamijyadan beddelka iyada oo aan wax dhibaato ah laga helin aaladaha ay saameeyeen iyagoo qayb muhiim ah ka ahaa hababka farsamada. Maanta waxaan ka hadleynaa barnaamij cusub oo beddelaad ah, kaas oo lagu daro kuwii horeyba ay Apple ugu fidisay alaabooyinka kale, iyo taas wuxuu saameeyaa Apple Watch Series 2 iyo Series 3 labadaba.
Sida laga soo xigtay Apple, barnaamijkan cusub ee loogu talagalay Apple Watch Series 2 iyo Series 3 waxaa u sabab ah arrimaha jajabaya qaar ka mid ah Saacadaha Apple ayaa ka muuqda muraayadda kore, gaar ahaan cirifka wareega, dildilaac si tartiib tartiib ah u sameysma shaashadda.
Macaamiisha buuxiya shuruudaha barnaamijkan beddelka ah ayaa codsan kara beddelka shaashadda gebi ahaanba bilaash adoo adeegsanaya adeeg idman ama toos u dhex mar Apple Store. Haddii aad rabto inaad ogaato haddii qalabkaagu uu saameynayo dhibaatadan, kaliya waa inaad gujisaa isku xirka xiga.
Taxanaha Cusub ee Apple Watch 5
Marka la soo bandhigo taariikhda rasmiga ah ee la soo bandhigayo iPhone-ka cusub ee 2019, waxaan sidoo kale ognahay taariikhda soo bandhigidda jiilka cusub ee Apple Watch, Taxanaha 5, jiil cusub oo hadaan iska indhatirno xanta, aan noo soo bandhigi doonin wax ugub ah oo lagu muujiyo, wixii ka baxsan sida caadiga ah ee sanadaha oo dhan, taas oo waxqabadka iyo awooda qalabka la hagaajiyay, iyadoo la yareynayo isticmaalkiisa marka loo eego jiilkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu u furaa barnaamijka beddelka Taxanaha 2 iyo 3 arrimaha shaashadda shaashadda
Caawinaad weyn oo aan la wadaago macluumaadkan, bilo kahor waxaan helay dildilaac waxaanan ka walwalayay xoogaa fikir ah sidaan ugu garaacay sida taxaddarka leh. Waxaan horeyba ula xiriiray taageero farsamo tufaax ah weyna dayactiri doonaan ama sida uu ninku ii sheegay waxay isiinayaan mid cusub. Mahadsanid Ignacio Sala
Jawaab Ali Lozano
Waxaan qaatay tayda iyo kun ku dhufasho, 3 sano ka dib isticmaalkeeda khilaafku wuxuu leeyahay, sida muuqata shaashadda waa inay ahaataa mid hagaagsan haddii aysan ku habboonayn
Waad salaaman tihiin, hada waxaan ka helay e-mayl tufaax ah inay badalayaan tayda. Mine sidoo kale xoogaa khilaaf ah laakiin yar, xitaa sidaas darteed waxaan u maleynayaa inay ii soo diri doonaan mid cusub oo ah wixii aan ka fahmay emaylka, iskuday inaad ku dirto boostada halkii aad u geyn lahayd dukaan jireed.
Waxaan ahay dhibbane kale oo cilladan; Abbaaraha 07:30 dildilaac ayaa ka muuqda koonaha Apple Watch 3 saacaduna tahay 09:00 qaybta kore ee muraayadda ayaa dhulka ku dhacaysa, sida sawirka labaad. Waxaan u geynayaa bakhaarka CC Gran Plaza 2, ee ku yaal Majadahonda, gabadha i soo xaadiraana waxay ii sheegaysaa inaanay dhib ku jirin beddelkiisa laakiin ay tahay inay hab maamuus ku dirto Adeegga Farsamada iyo inay ii soo wac si kasta oo ay tahay. Dhowr maalmood ka dib, waxay ku soo jawaabaan emayl "Qalabku wuxuu leeyahay dhibaato xagga qalabka ah" (Normalll, shaashadda ayaa soo baxday!). Bixi € 150 ama codso lacag celin DIIWAANKA KOWAAD EE AAN KA SAMEEYO IN AANAN BARAN BARNAAMIJKA Maadaama aanan haysan waddo aan kula hadlo, waxaan aadaa dukaanka waxayna ii sheegeen inaan weydiisto lacag celin aan arko ka dibna aan dalbado. Dhowr maalmood ka dib waxay iigu wargeliyeen emayl si aan u soo qaado. Iyagu ima siinayaan sharraxaad ka badan weedha ah "Dhibaatada qalabka", iyo in aan bixiyo kharashka dayactirka, taas oo aan danaynayn aniga oo arka waxa saacadda ku dhacaya 14 bilood. Sheegashada LABAAD EE AAN II SIIJIN JAWAAB KALA DUWAN CODSIGAYGA. Waxay igu soo celiyaan saacadda iyaga oo leh dildilaacyo kala duwan oo aanan qabin maalintii ugu horreysay waxaanan DALBADKA SADDEXAAD U SOO CELIYAY SOO NOQOSHADA, iyadoo la iibiyo iibiye aan fiicnayn oo ay tahay inuu u cudurdaarto qof kale oo ay wada shaqeeyaan. Waxaan hallucinate !! KALIYA WAAN CODSANAYAA CODSIGA BARNAAMIJKAN, OO AY KA SOO CELIYEEN WAAYO WAAYEYSAN YAHAY QALADAAN TILMAANTA TELPELKA. Aad ayey ugu wanaagsan tahay warbaahinta sidan oo kale ah in la faafiyo warka, laakiin markay dhab ahaantii dhacaan AYAAD gacmahaaga dhaqdaa !!! Waxay yihiin nooca tayada 1aad laakiin waxa ka dambeeya sheyga (adeegga macaamiisha, habka isgaarsiinta, howlaha, ...) ee safka 2aad. Oh, iyo dukaanka, oo ay ka buuxaan cabashooyin kala duwan wakhtigaas, miiskayga miiska laba carruur ah oo isla dhibaatadayda ila mid ah, oo sugaya in la daryeelo ... waxay horeyba u arkeen dhammaadka. Oo sida iibiyuhu ii sheegay, kuwa kaliya ee xallin kara waa maamulayaasha bakhaarka ... waa hagaag, waa sidee murugo aad u leedahay inaad edeb yeesho oo aad fuusho digaagga qarniga si ay kuu maqlaan.